မကြေးမုံ၏ တွေးမိသမျှ: "အခုတော့ဟာသ တစ်ချိန်တုန်းကတော့ ဒုက္ခ "
posted by mirror time 2:58 PM
14 Responses to “"အခုတော့ဟာသ တစ်ချိန်တုန်းကတော့ ဒုက္ခ "”
Shift + X = ဌ ....
ကွင်းဆင်းရင်း..ဒါမျိုးတွေ ကြုံဖူးတယ်။ ပြန်တွေးတော့.. ရီစရာလိုလို..
ဟေးးးး ဟေးးးး မီးလာပီဟေ့
ကိုယ်တိုင်ရောက်နေသလိုမျိုး ခံစားလိုက်ရတယ် ညီမလေးရေ...ဟုတ်တယ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင် ကြောက်စရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုဆိုတာ အသေအချာပါပဲ......
အစ်မမို့လို့ခံနိုင်ရည်ရှိတာ။ ညီမသာဆိုကြောက်လွန်းလို့ နှလုံးသွေးရပ်သွားမလားပဲ။ ရွာကတော်တော်ခေါင်လို့လားဟင်။
ဒါများ အဲ့ရှေ့နားက အေ့နေတဲ့လူတွေဆီသွားပီး ကိုယ်ပါရောအေ့နေလိုက် ပီးရော.. ဟာဟ.. ဟီး. ရယ်ရသဗျ..
ဥက္ကဋ္ဌ.. or.. ဥက္ကဌ ????
the first one is.. shift + \_ ..
the second one is.. shift + x (like U Nge said)
ရုံးက အဖော်လေးဘာလေး ထည့်မပေးလိုက်ဘူးလား။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထဲ ခရီးသွားရတာကို။
ကို andy ရဲ့မီးလာနည်းကတော့ နှိပ်တယ်။
ညီမ အဖြစ်ကို စာနာလို့ရပါတယ်။ နောက်ဆိုမရောက်ဘူးတဲ့ ဒေသဆို အဖော်ခေါ်သွားဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်
ဟားဟား ပျော်စရာကြီး မျက်လုံးလေးကလယ်ကလယ်နဲ့
ရေးထားတာ တကယ် ပီပြင်တယ်ဗျ ၊
“အားငယ်ခြင်း”ဆိုတဲ့ အဖြေကို ရှာတွေ့ဖို့ ပေးလိုက်ရတဲ့ “ကြောက်လန့်ခြင်း” ကတန်ဖိုး ရှိပါလေရဲ့ ဗျာ ........ ။
ဥက္ကဌ မပေါင်း ချင်ရင် အလွယ်လေး ၊ သူကြီးလို့ပေါင်းလိုက်ပေါ့ ဟီဟိ ။ ဒါနဲ့
လူငယ်ဥက္ကဌ ကို ဘာလို့ လူကြီးလို့ခေါ်တာလဲဟင် ?